नयाँ वर्ष #HappyNewYear2078 • Health News Nepal
✍️ डा.अनन्त अधिकारी
धर्तीले सूर्य लाई किन परिक्रमा गरिरहेछ
युगौ युग देखि?
हेक्का छैन किन फेरो मार्छ
चन्द्रमा ले पृथ्वी लाई ?
केवल पात्रोका जोड घटाउ हरू
आज यो सालको अन्तिम दिन ,
भोलि नयाँ बर्ष ।
मस्तिष्क उद्वेलित हुनुको नि सिमा हुन्छ
जिसस एउटा नयाँ बर्ष ,
बिक्रमादित्य अर्को नयाँ बर्ष ,
फरक नयाँ बर्ष हाम्रै बुद्ध अनि संखधर पनि ।
सूर्य एक , चन्द्र एक , एउटा पृथ्वी
र पनि , अनेक नयाँ बर्षहरू
मैले नबुझेका यी नयाँ बर्षहरू ।
अनगिन्ती नयाँ बर्ष का अनगिन्ति सुंगा रटाइ हरू !
किन छुदैनन ,
शुभकामना का श्लोक हरूले लोकलाई ?
किन घटिरहेका छैनन
हरेक दिन बाकास भित्र वापस आउने
मृत छोराका लासहरू ?
किन टालिन्नन, पिपासुले दिन दहाडै बनाएका
चेली चोर जस्केला हरू ?
किन घटी रहेछ दिन दिन बिस्वास
दीन हिन हरूको वजनदार भनिने हरू प्रति ?
अझै पनि भन्न छोड्दिन म
यो नयाँ बर्षमा
कमसेकम गौतमहरू नमारियुन,
तैं होस भन्न सकियोस
दिन दहाडै छातिमा प्वाल रोप्ने लाई ।
जिन्दाबाद र मुर्दाबादको सिकार हुनु नपरोस
निर्दोष मंडल , शाह र मेहता हरूले ,
सोझालाई सुली र चोर लाई चौतारी को
अलिखित तर प्रचलित ऐन
मनै देखि खारेज होस।
कम पिडा दायी हुन
अर्को बर्षका शुभकामनाका नारा हरू ।
नयाँ बर्ष को शुभकामना ।।
(डा. अधिकारी मानसिक रोग अस्पतालमा‌ कार्यरत हुनुहुन्छ। )
Tags: Corona Virus #Covid19Dr. Anant AdhikariHappy new yearMental Hospital